उद्धार उडानबाट फर्केपछि ‘भनसुन’मा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै घर ! – RemitKhabar
उद्धार उडानबाट फर्केपछि ‘भनसुन’मा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै घर !
by Remit Khabar - 30/08/2020 0
काठमाडौँ । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)को समन्वयमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सरकारले उद्धार गरिरहेको छ ।
उद्धार उडानबाट फर्कनेले काठमाडौँ उपत्यकामा तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै होटल क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइन जान पाउँछन् । तर, पहुँच भएकाहरु ‘भनसुन’ मार्फत विमानस्थलबाट सिधै घर जाने गरेको पाइएको छ ।
कोरोना परीक्षण बिना नै आएकालाई होटल क्वारेन्टाइनमा राखेर पीसीआर परीक्षण गराउनुपर्छ । तर, विदेशबाट फर्किनेहरु पहुँचको आधारमा सिधै विमानस्थलबाटै घर जाने गरेको त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।
केही दिनअघि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरस नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेहरु सिधै विमानस्थलबाट घर जान पाउने बताएका थिए । तर, उनले भनेजस्तो भएको छैन । उद्धार उडानबाट फर्किनेलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्नेबारे सरकारका कुनै नियकाले अनुगमन गर्दा थप भद्रगोलता थपिएको छ ।
आईएमईको घरमै रेमिटेन्स सुविधा